Horror – Yourcinema
1BR ဆာရာဆိုတဲ့​ကောင်မ​လေးဟာ သူမအ​မေနာမကျန်းဖြစ်​နေစဥ်မှာ အ​ဖေဖြစ်သူက ​သူနာပြုဆရာမနဲ့ ​ဖောက်ပြန်​နေတာကို သိပြီး​နောက်မှာ စိတ်ဒုက္ခ​ရောက်ခဲ့ရသူပါ။ အ​မေဖြစ်သူဆုံးပြီး​နောက်မှာ သူမရဲ့ အိပ်မက်​တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ နာကျင်ဖွယ်အတိတ်ကိုစွန့်ခွာပြီးပြီးပြည့်စုံတဲ့ LA မှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုဆီ​ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တိုက်ခန်းက အိမ်​မွေးတိရစ္ဆာန်​တွေကို ခွင့်မပြု​ပေမယ့် သူမက​တော့ သူ့​ကြောင်​​လေးကို အိမ်နီးချင်း​တွေမသိ​အောင် ​မွေးထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်​ပြောင်းပြီး မကြာခင်မှာပဲ အိပ်မပျော်နိုင်တဲ့အပြင်ထူးဆန်းတဲ့ဆူညံသံများနဲ့ ခြိမ်းခြောက်တဲ့စာ​တွေကြောင့်စိတ်သောကရောက်ခဲ့ရပြီး သူမရဲ့ဘဝသစ်လည်း လျင်မြန်စွာပျက်ပြားသွားခဲ့ရပါတယ်။ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမှန်တရားကိုသူသိသွားတဲ့အချိန်မှာ​တော့ သိပ်နောက်ကျသွားပါပြီ။ သူမရဲ့ အိမ်နီးချင်း​တွေဟာ စသိခါစက သိပ်​ဖော်​ရွေသ​လောက် အခုသူမကို အစွန်း​ရောက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆီ သွတ်သွင်းဖို့ ကြိုးစားသူ​တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ သူမဟာ နဂိုကတည်းက အထီးကျန်စိတ်ပျက်အားလျော့မှု​တွေက​နေ စိတ်ခွန်အားကိုရှာ​တွေ့မလား ဒါမှမဟုတ် အဲ့မှာပဲ ထာဝရပိတ်မိ​နေမလားဆိုတာကို​တော့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆက်ကြည့်ရှုကြရမှာပါ။ ==-=-=-=-=-=-=- Review Credit Translated By Jay Yang Encoded By Nanda Kyaw
IMDB: 5.8/10 1,870 votes
The Eye of Silence မင်းသမီးဟာ အမှောင်ထုထဲမှာအရာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ... သူဟာ တစ်နေ့ ပါတီတစ်ခုမှာသူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အသတ်ခံလိုက်ရတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့လိုက်ပြီးနောက်မှာ.... သူဟာအဲဒီလိုမျက်မြင်သက်သေအဖြစ်ကနေဘယ်လိုရူန်းကန်ပြီးကြိုးစားမလဲဆိုတာ.... အမှောင်ထုထဲမှာမြင်နိုင်စွမ်းတစ်ခုရှိနေတာ ဆုတောင်းကောင်းခဲ့တာလား အပြစ်ပေးခံရတာလား .... ဘေကျင်းမြို့ကြီးမှာဆိုရင် အဲဒီလိုအမြင်ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုရှင်သန်နိုင်မလဲ.... Translated By Nyo Gyi Encoded By YC Team
IMDB: 6/10 47 votes
The Strangers: Prey at Night လာပါ​ပြီဗျာ.. ဟိုတစ်​နေ့က တင်ခဲ့တဲ့ The Strangers (2008) ရဲ့​နောက်ဆက်တွဲ The Strangers:Prey at Night (2018)ကား​လေးကို တင်ဆက်​ပေးလိုက်ပါပြီ ​နောက်ဆက်တွဲဆို​ပေမယ့် ​ရှေ့ကကားနဲ့ အဆက်စပ်မရှိလို့ ဒီကားကိုတန်းကြည့်လဲရပါတယ် ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာကလည်း ပရိသတ်နဲ့မစိမ်းတဲ့ The other side of the doorတို့ 47 meters downတို့လိုဇာတ်ကား​တွေရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Johannes Roberts ပဲဖြစ်ပါတယ် ဆို​တော့ ဇာတ်ကားရဲ့အရသာကို​တော့ ခန့်မှန်းမိမှာပါ ထူးခြားတာက အရင် The Strangers(2008)ကို ရိုကိကူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာကလဲ ဒီကားမှာ ဇာတ်ညွှန်းအ​နေနဲ့ပါဝင်ထားပါ​သေးတယ် ဇာတ်လမ်းက​တော့ မိုက်၊ စင်ဒီ၊ လုခ်၊ ကင်ဆီဆိုတဲ့ မိသားစု​လေး​ယောက်က သမီးဖြစ်သူ ကင်ဆီကို ​ဘော်ဒါ​ဆောင်မပို့ခင်မှာ အပန်း​ဖြေခရီးအ​နေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အန်ကယ်မက်နဲ့ အန်တီရှယ်တို့ရဲ့ ဂတ်တင်လိတ်အပန်း​ဖြေအိမ်ရာဆီကို ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ် ကင်ဆီက​တော့ ​ဘော်ဒါ​​ဆောင်မသွားချင်လို့ မိဘ​တွေအ​ပေါ်မှာ စိတ်ဆိုး​နေပြီး ...
IMDB: 5.2/10 25,016 votes
The Call ဒီကားလေးကတော့ 2013ထဲက ထွက်ရှိထားပြီးတော့ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက် IMDb Rate 6.7ရရှိထားတဲ့ Crime,Dramaအမျိုးအစား ဇာတ်ကားလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ကြသူတွေကလဲ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေပါ။ ဇာတ်လမ်း စ လယ် ဆုံးကို ရသမျိုးစုံစွာ ကြည့်ရှု့ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ Jordanဟာ အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနမှ အတွေ့အကြုံရှိသူ တစ်ယောက်ပါ။ တစ်ရက်မှာတော့ ပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် မိန်းကလေး Caseyဆိုသူထံမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခု ရခဲ့ပါတယ်။Caseyကို ကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားရင်း နောက်ပိုင်းမှာ Jordanတစ်ယောက် သိလာတာက အရင်က Leahပြန်ပေးဆွဲမှုမှာ ကျူးလွန်ခဲ့သူသည် တစ်ယောက်ထဲဆိုတာ သိလိုက်ရတယ် Jordanတစ်ယောက် လူသတ်တရားခံကို ဘယ်လိုဆက်စပ်မိသွားတာလဲ။ Caseyကိုရော ကယ်တင်နိုင်မှာလား ဆိုတာကို အချိတ်အဆက်မိမိ ရိုက်ပြထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ Translated By - Aye Mya
IMDB: 6.7/10 108,604 votes
Child’s Play အရင် ချက်ကီကားတွေကြည့်ဖူးသူတွေအတွက် နောက်ဆုံးထွက် ချက်ကီကားလေးပါ ဒီတစ်ခါတော့ထူးထူးခြားခြား ဇာတ်ကားပုံစံလေးနဲ့ဖြစ်လို့ကြည့်လိုက်ပါဦး ဘာသာပြန်သူနဲ့ တင်ဆက်ပေးလိုက်သူကတော့ ဟောဇိန်း ပဲဖြစ်ပါတယ်......... Translated & Review By Haw Zein
IMDB: 5.8/10 37,690 votes